समृद्ध नेपाल - Page 285 of 287 -
भगवान गणेशको कृपा पाउँन यसरी गर्नुहोस पुजा ! आस्था हुनेहरुले सेयर गर्नुहोस हुनेछ चमत्कारीक लाभ
जकार्ता / इन्डोनेसियाको लायन एयरको बोइङ ७३७ यात्रुबाहक बिमान सोमबार बिहान उडेलगत्तै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । उक्त जहाजमा चालक दलका सदस्य सहित एक सय ८८ जना रहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् । इन्डोनेसियाको राजधानी जकार्ताबाट उडेको १३ मिनेटभित्रै बिमानसँग राडारको सम्पर्क टुटेको थियो । उक्त जहाज समुद्रमा खसेको भेटिएको छ । भिडियो फुटेजमा समुद्रको पानीमाथि हवाईजहाजबाट
आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेर रातभर गरे यस्तो निच काम !
एजेन्सी । मायाप्रेम, विहे र यौनसम्बन्धका कारणले कस्ता कस्ता घटना निम्तन्छन् । मानिसहरु कतिसम्म घिनलाग्दो क्रियाकलाप गर्न सक्छन यसको कुनै अन्दाजा नै लगाउन सकिन्न । भारतमा यस्तै एउटा घिनलाग्दो र पत्यार नै गर्न नसकिने अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ ।घटना भारतको राजधानी नयाँदिल्लीस्थित निहाल विहारको हो । जहाँ एक पुरुषले मदिराको नशामा पत्नीको हत्या गरेर
पहिलो निर्णय पतिको मागमा पहिलोपटक सम्बन्धबिच्छेद !
ताप्लेजुङ : जिल्ला अदालत ताप्लेजुङले मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ अनुसार पुरुषको सम्बन्धविच्छेदको निवेदनमा पहिलो निर्णय सुनाएको छ । भदौ १९ गते सम्बन्धविच्छेदको निवेदन दिएका फुङलिङ नगरपालिका–६ का ६२ वर्षीय अमृतबहादुर लिम्बूको पक्षमा पत्नीसँगको सम्वन्धबिच्छेदको फैसला गरिदिएको हो । जिल्ला न्यायाधीश कृपासुर कार्कीको इजलासले लिम्बूको माग अनुसार ५६ वर्षीया पत्नी पृथीमाया लिम्बूसँग सम्वन्धबिच्छेदको फैसला गरेको अदालतका
अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० क्रिकेट वरियतामा पारस ३९ औं, सोमपाल ६१ औं स्थानमा !
१२ कात्तिक, काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० क्रिकेट वरियतामा नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान पारस खड्कासहित सोमपाल कामी, शरद भेषावकर र बसन्त रेग्मी परेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय टी-२० अलराउण्डरको वरियतामा नेपालका कप्तान पारस खड्का ३९ औं स्थानमा र सोमपाल कामी ६१ औं स्थानमा छन् । टी-२० ब्याटिङ वरियतामा पनि कप्तान पारस ९४ औं स्थानमा र शरद भेषावकर
परिवारसहित महेन्द्रनगरमा फेरि प्रदर्शन सुरु : निर्मला बलात्कार–हत्या प्रकरण
कञ्चनपुर – १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या ३ महिना बितिसक्दासमेत हत्यारा पत्ता नलाग्दा हत्यारा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै महेन्द्रनगरमा फेरि प्रदर्शन सुरु भएको छ । साउन १० गते बलात्कारपछि हत्या भएकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको ३ महिना बितिसक्दसमेत अझैसम्म प्रहरीले अपराधी सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । आज निर्मलाका परिवार,
सेड्रीनाले अनुभबलाई यसो भनिन्, भबिस्यमा राम्रो कलाकार र ब्यापारी हुने !
विकास राज आचार्यको फिल्म नाई नभन्नु ल को पाचौं सिरिज प्रदशन भईरहेको छ । नाई नभन्नु ल को पहिलो सिरिजबाट निकै फ्यान फलोइङ बनाउन सफल भएका बाल कलाकार अनुभव रेग्मी नै मूख्य भुमिकामा देखिएका छन् । यस सिरिजमा अनुभवको अपोजितमा सोड्रिमा शर्मा देखिने भएकी हुन् । प्रियंका कार्की, दिलिप रायमाझी, केकी अधिकारी, स्वस्तिमा खड्का, बुद्धी
नायिका केकी अधिकारी प्रेमीको गीतबाट निर्देशनमा गरिन् डेब्यू !
राम्रो अभिनय गर्न सक्ने क्षमता भएकी नायिका हुन् केकी अधिकारी । उनलाई म्युजिक भिडियोमा दर्शकले अत्यन्तै रुचाउने गरेका छन् । उनको चन्चले स्वभावका कारण पनि उनी दर्शककी प्यारी बनेकी छिन् । म्युजिक भिडियोमा रुचाइएकी उनै केकी चलचित्र नगरीमा भने अहिलेसम्म खासै जम्न सकेकी छैनन् । चलचित्र स्वरबाट चलचित्र नगरीमा पाइला टेकेकी नायिका केकी अधिकारीले आफैले
यक बर्ष पछि व्यवसायी शरद गौचन हत्याका ‘मूख्य सूटर’ सहित तीनजना पक्राउ !
काठमाडौं : व्यवसायी शरदकुमार गौचनलाई गोली हानी हत्यामा संलग्न तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । अमर रानामगर, लोप्साङ लामा र रोशन बुढाथोकीलाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको टोलीले सोमबार कोटेश्वरबाट पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार अभियूक्त अमर रानामगर नै शरदका मूख्य सूटर थिए । तीनै जना अभियुक्तलाई प्रहरीले आजै सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
खुल्लामञ्चमा विप्लवले फेरी मंसिर ८ गतेभाषण गर्ने, प्रहरी यस्तो तयारीमा !
काठमाडाैं । अर्धभुमिगत ढंगले विभिन्न गतिविधि संचालन गर्दै आएको नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले मंसिर ८ गते खुल्लामञ्चमा कार्यक्रम गर्ने भएको छ । सरकारको खोजी लिस्टमा रहेका विप्लव आफै सार्वजनिक रुपमा भाषण गर्ने जनाएपछि सरकारमाथि थप सुरक्षा चुनाैति थपिएको स्रोतको दावी छ । सरकारले विप्लव र सिके राउतलाई निगरानी गर्न भन्दै स्पेसल टास्क फोर्सको
पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत भयो भएनक दुर्घटना, गयो तीन जनाको ज्यान गयो !
कपिलवस्तु – पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत गोरुसिंगे जंगलमा टिप्पर र बस एक आपसमा ठोक्किँदा ठक्कर ती जनाको ज्यान गएको छ । दुर्घटनामा परि ३३ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परि मत्यु हुनेमा दाङको गडवा गाउंपालिका बस्ने ४ वर्षीय सुशान्त सुनार,२५ वर्षीय पूजा सुनार र नाम नखुलेका अन्दाजी ४० वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको